Makwikwi sei neApple Watch uye shamwari dzako muChiitiko | Ndinobva mac
Parizvino isu tese tinoziva sarudzo dzinopihwa neApple Watch kuti tigare takakwana: zvinoita kuti tisimuke awa rega kweminiti, zvinotikurudzira kufamba zvishoma kupfuura zuva rapfuura nemeseji dzakasiyana, inopa ruzivo rwese rwakakodzera kwatiri kuti tikunde zuva nezuva asi pane chinhu chimwe chandinonyanya kufarira uye icho chiri kwikwidzana muChiitiko uchipesana neshamwari dzedu, vatinozivana navo kana mhuri.
Iyi ndeimwe yesarudzo dzinopihwa neApple Watch iyo yatinogona kumisikidza kana kudzikamisa kuzvikurudzira nekurovedza muviri zvakanyanya, haufanire kurasikirwa nekukunda kana iri makwikwi (inovawo) chinhu chakakosha ndechekuti inotikurudzira kuti tirambe tichirovedza muviri uye unzwe zvakanaka.
Zhizha riri kuuya uye makwikwi aya anogona kukubatsira iwe nechinangwa chako chekuwana chimiro
Hazvina kana kunonoka kutanga kuita kumwe kurovedza muviri uye nekungofamba famba isu tiri kutopisa macalori mukuwedzera pakuwana tsika ine hutano yemuviri wedu, kana isu tichiedzawo kudya zvine hutano muviri wedu unozvikoshesa nekufamba kwenguva. Zviripachena usatarisira kuve nemhedzisiro mumavhiki maviriIyo inononoka asi inodikanwa maitiro ekugadzirisa kufamba uye kudya zvakanaka. Nekufamba kwenguva muviri wedu unovandudzika uye tinonzwa zvirinani.
Makwikwi nevamwe vashandisi ari nyore kuita uye isu tinongofanirwa kunge tichive tichigovana chiitiko ichi nevamwe vanhu. Kana tangova neichi chinoshanda, isu tinongofanirwa kubaya pane Chiitiko chemunhu watinoda kukwikwidza naye paApple Watch pachayo uye tinya pane sarudzo inoonekwa kumagumo: Kwikwidza. Kana tangoita chiito ichi, mumwe mushandisi anofanira kubvuma makwikwi acho kuti atange uye vanogara vachidaro rimwe zuva mushure mekunge azvigamuchira. Iyo poindi sisitimu inotsanangurwa chaizvo uye chaizvo kupfuura kukwikwidzana nemumwe munhu kuti uone "ndiani anowana chakanyanya kupwanya" iyi sarudzo inoita kuti isu tibatike zvakanyanya mukurovedza muviri, izvo pakupedzisira ndicho chinangwa chikuru cheichi chiitiko.
Wakatokwikwidzana nevamwe vashandisi here? Wakakwanisa kuvarova here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekukwikwidza neApple Watch uye shamwari dzako muChiitiko
Chibvumirano pakati peApple neQualcomm ndicho chikonzero nei Intel yakasarudza kusaenderera nemamodemu e5G